जब होस् आयो त्यतिबेला म होटलको दुई तलामाथि कोठामा थिए ! « Etajakhabar
जब होस् आयो त्यतिबेला म होटलको दुई तलामाथि कोठामा थिए !
गत शुक्रवार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-४ बलियामा सामूहिक क’र’णीमा परेकी ३१ वर्षीया महिला अहिले कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचारका क्रममा छिन्।
क’र’णीका क्रममा यौ’ना’ङ्ग क्ष’त’वि’क्षत भएकाले उनको अवस्था गम्भीर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन्। उपचारका क्रममा पनि उनी राम्ररी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अस्पतालमा रहेका पीडित महिलाका आफन्तका अनुसार बेला बेला उनी कराउने र छ’ट्प’टाउने गर्छिन्।
उनी राम्ररी बोल्न सक्दिनन् । उनलाई कोसी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । सामूहिक ब’ला’त्का’रको शिकार बनेकी उनलाई अर्धचेत अवस्थमा भेटिएको बावुले बताए । ‘यो’नीदेखि र’ग’त बगेको थियो । शरिरभरी चो’टप’ट’क ला’गे’को छ,’ छोरीको कुरुवा बसेका बावुले भने, ‘छोरीको अवस्था अहिले पनि चिन्ताजनक छ ।’
उनी रुने कराउने, चि’च्या’उने र घरीघरी बेहोस हुने गर्छिन् । छोरीलाई गरेको आ’क्र’मणको चो’ट’प’टक अहिले पनि शरिरभरी छ । उनको जीउभरी नि’ल’डामहरु छन् । रातभरको पी’डा’ले छोरी बेहोस थिइन् । कोठा र ओछ्यान र’क्ता’म्य थियो । कोठामा ल’डि’रहेकी थिइन् । उपचारमा ल्याउने क्रममा र’ग’तले गाडीको सिट नै र’क्ता’म्य भएको थियो ।
एक साताअघि मात्रै इटहरीमा काम सुरु गरेकी महिला शुक्रवार दिउँसो गछियास्थित घर जाँदै थिइन। घर जाँदै गर्दा लिफ्ट दिने भन्दै एउटा मारूती भ्यानमा तीनजना पुरुष आइपुग्छन्।
लिफ्ट दिने भन्दै चढाए पनि उनीहरुले महिलालाई सिधै बलियास्थित श्रेष्ठ होटल एन्ड फेमिली लजमा पुर्‍याउँछन्। पीडित महिलाको बयान अनुसार ती युवाहरूले साँझ करिब ७ बजे होटलमा पुर्‍याएका थिए। एकछिनमा बहिनीको घर पुर्याइदिन्छु भन्दै उनलाई केही खाना दिए।
यो खाना खाएपछि आफू बेहोस भएको उनले सुनाएकी छन्। होटलको एउटा कोठामा थुनेर महिलालाई तीन जनाले रातभर पालैपालो क’र’णी ग’रे’को खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
बेहोस बनाउने वस्तु खान दिएपछि होसमा आउँदा होटलको दुई तलामाथि कोठा थिए । कोठामा लगेर तीन जनाले नै पालैपालो ब’ला’त्का’र गरे । सुरुमा गाडीमा राखेर लैजाने युवकले, पछि अर्जुन र सुरजले ब’ला’त्का’र ग’रे’का थिए ।
होटलमा मलाइ पु-याएपछि बाहिरबाट गेट र ढोका बन्द गरे । सुरूमा गाडीमा लैजाने युवाले र त्यसपछि अर्जुनले गरेर गएपछि उसको भाइ सुरज आयो । मैले प्रतिकार गर्न खोज्दा त्यसबेलामा म माथि आ’क्र’मण ग’रेपछि त्यसपछि पुरै बेहोस भएछु ।
प्रतिकार गर्दा एक जनाको लिं’ङ’गमा ला’त्तले हा’निदिएँ । त्यसपछि आ’क्रो’शित भएका लामो कपाल हुनेले मेरो यौ’नां’गभित्र हा’त घु’सा’ए । त्यसपछि यो’नी क्ष’त’वि’क्षत भएर र’ग’त बग्यो । अहिले पनि र’ग’त ब’गिरहेको छ ।
सामूहिक क’र’णी’मा सं’ल’ग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुन्दरहरैचा नगरपालिका– ४ का ३६ वर्षीय अर्जुन श्रेष्ठ र उनका भाइ २५ वर्षीय सुरज श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार घटनामा सं’ल’ग्न एक जना भने फरार रहेका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।